Olana nefa ny fahamaroan’ireo olona mpitrandraka misehatra amin’ny tsy ara-dalàna ka manao izay tiany atao sy saim-pantany fotsiny izy ireo. Nidina nijery ifotony tany mihitsy ny teo anivon’ny Ivontoerana misahana ny Sehatr’asa Volamena (ANOR) avy aty Antananarivo nandrindra sy nandamina ireo mpitrandraka volamena tsy ara-dalàna maro be any an-toerana. Rehefa izay dia nitafa sy nidinika ary indrindra nampahafantatra tamin’ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana volamena sy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izy ireo ny amin’ireo andraikitra sy ireo tombontsoa amin’ny fidirana amin’ny ara-dalàna. Tanjona ny hahazoan’ny mpisehatra, ny mpandraharaha ary indrindra ilay faritra mihitsy ny tombontsoa amin’ny alalan’ny fahazoan-dalana sy ny karatra maha matihanina isaky ny sokajiny. Amin’izany no hisian’ny tamberim-bidy amin’ny fitrandrahana ny volamena any ka hanatsara ny toekarena ankapobeny mihitsy.